စိတ်ကူးချိုချို - Book Sales & Distribution Shop စိတ်ကူးချိုချို - Book Sales & Distribution Shop
Price On Call:+951542 973
Education Type books-and-information
စိတ်ကူးချိုချို စာအုပ်တိုက်ကို ၁၉၉၉ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ စာအုပ်တိုက်မှ (၁) ခင်မောင်ညို (ဘောဂဗေဒ) သင့်ဖောက်သည်ကို ဘယ်လိုဆက်ဆံမလဲ၊ (၂) ဒေါ်နုကြည် (မဟာဝိဇ္ဇာ) စိတ်ကူးလိပ်ပြာ စာစီစာကုံးများ စသည့် စာအုပ်၂အုပ် ကို ၁၉၉၉ခုနှစ် မတ်လမှာ စတင်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။
စာအုပ်တိုက်ဟာ ရေရှည်ရပ်တည်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ငွေကြေးအကျိုးအမြတ် အတိုင်းအတာတစ်ခုရဖို့နဲ့ စာပေအကျိုးအမြတ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရဖို့ ဦးတည်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး စာအုပ်ဈေးကွက်မှာ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ စာအုပ်အမျိုးအစားမှန်သမျှ ထုတ်လုပ်သွားဖို့ အင်တိုက်အားတိုက် အရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ သုတစာပေနဲ့ ဆက်နွယ်လာတဲ့ စာရေးဆရာအသစ်များကို လုံလောက်ကောင်းမွန်တဲ့ အရေးအသားနဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှု ရှိရင် ရှိသလို လမ်းကြောင်းဖွင့် ထုတ်ဝေပေးဖို့ အဆင်သင့် ရှိနေပါတယ်။ ရသစာရေးဆရာအသစ်များအတွက် လတ်တလော စီစဉ်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိဘဲ မဂ္ဂဇင်းစာမျက်နှာများမှာ အောင်မြင်စွာ ဖြတ်သန်းနေသူများကိုတော့ ငြင်းပယ်ခြင်းမပြုဘဲ ကမ်းလှမ်းချက်များအတိုင်း အလှည့်ကျ ထုတ်ဝေပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စာအုပ်တိုက်အပေါ် ဝေဖန်အကြံပြုညွှန်ပြတာတွေကို အမြဲတမ်း လက်ခံကြိုဆိုလျက်ရှိပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း အမှားအယွင်းကင်း၊ အပြစ်အနာအဆာ နည်းတဲ့ ထုတ်ဝေရေးမျိုးဖြစ်အောင် အမြဲပြုပြင်အားထုတ် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါတယ်။ အဆင့်ဆင့် ပညာရှင်များနဲ့ အဆင့်ဆင့် ၀န်ထမ်းများကြားက ပေါ်ပေါက်လာ တဲ့ အမှားအယွင်းတို့အတွက် ခွင့်လွှတ်ဖြည့်စွက်အားပေးခဲ့ကြသူ စာဖတ်ပရိသတ်များကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိသလို လေးလေးစားစားလည်း အနူးအညွတ် တောင်းပန်အပ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ စာအုပ်တွေ မပျောက်ကွယ်သွားရေးအတွက် စာအုပ်ချစ်သူများဖြစ်တဲ့ စိတ်ကူးချိုချိုစာအုပ်တိုက်ဟာ အမြဲဖြည့်စွမ်းခွင့်ရရှိချင်တာပါ။
ကျွန်တော်တို့ ပုံနှိပ်တိုက်ရဲ့ လိပ်စာက ၆၇၊ ၁၆၄ လမ်း၊ တာမွေမြို့နယ်မှာပါ။ အလုပ်အပ်နှံရင်လည်း အဲဒီမှာပဲ အပ်နှံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြား ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းများနည်းတူ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်း၊ စာစောင်၊ လက်ကမ်း၊ ကြော်ငြာ၊ ပြက္ခဒိန်၊ လိပ်စာကတ် စသည်ဖြင့် အားလုံး ရိုက်နှိပ်ပေးသလို အထူးဆောင်ရွက်ပေးမှာက စာအုပ်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း (Book Making) ပါ။
အပ်နှံလာတဲ့ စာအုပ်မျိုးစုံကို အပြီးအစီး ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးရာမှာ အပ်နှံသူ အလိုရှိတဲ့ ပုံစံအမျိုးမျိုးကို ကောင်းနိုးရာရာ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းပြီး ဈေးကွက်နဲ့ အံဝင်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာမူကနေ စာအုပ်အထိ လိုအပ်တဲ့အဆင့်ကို ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
No.(67), 164th Street, Tamwe Township, Yangon, Myanmar.
Tel : (+95) 01 542 973 , 01 700302 Fax : (+95) 01 542 973
H.P : (+95) 09 5105095
Email: skccph@gmail.com, seikkuchocho.order@gmail.com
Visit our Website : http://www.skccmyanmarbook.com
Book Distribution Shop